Times24 Nepal » पहिलो पटक गीत रेकर्ड गर्दा खुसीले आँ’सु झर्‍यो। हिरो राई
पहिलो पटक गीत रेकर्ड गर्दा खुसीले आँ’सु झर्‍यो। हिरो राई
चुर्ण पुन मगर: सांगीतिक छेत्रमा उदाउदै हुनुहुन्छ छ त सर, कसरी सम्भव भयो’ ?
हिरो राई: म सानै देखि गीत गाउन र एक्टिङ्ग गर्न मन पराउथेँ। वास्तविक त्यो बालापन थियो। सबै काम कुरा जिन्दगी आफ्नै तरिकाले चल्दै थियो। पछिल्लो समय अनलाइनको माध्यमबाट पनि गीत गाउन र आफ्नो गीत कस्तो भयो भन्ने सजिलै सुन्न र साथी संगी बीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा र अबत मेरो आफ्नै कलामा निखारता आउन थाल्यो कि भन्ने आभास गर्न सजिलो भएको थियो।
मैले गीत गाउन को लागि सानो कार्यक्रम स्टेजमा म्युजिक ट्रयाकमा गीत गाउने प्रयास गर्ने गर्थे। २०७० साल देखि गाउदै आउदा २०७४ साल मा गीतकार लभ्ली तुलशीको ‘तोरी हरियो’ भन्ने गीत गाउने अवसर मिलाई दिनु भयो। तोरी हरियो गीतले मलाई अझ चिनाउने अवसर र दर्सक श्रोताको माया पाउन थाले। अनलाइनमा इन्टरनेटबाट र प्रत्यक्षदर्शी आफन्त साथीभाई बाट बधाईको ओईरो र हौसला पाए।
२०७४ साल मेरो लागि राम्रो अवसर रहेछ, रेडियो लगायत विभिन्न युट्युब टेलिभिजनमा दर्सक श्रोता माझ अझ आफुलाई चिन्ने र चिनाउने अवसर मिल्यो। २०७६ अन्तिममा ‘कस्ले काट्यो नि वर’ भन्ने गीतमा पुन काम गर्ने अवसर पाए। र अहिले नेपाली चलचित्र को गीतहरुमा काम गर्ने अवसर पाएको छु। जुन चलचित्र छायांकन भैरहेको छ।
चुर्ण पुन मगर: भनेपछि, तोरी हरियोबाट तपाईंको साँगीतिक यात्रा सुरु भयो। कस्तो फिल भएको थियो पहिलो गीत गाउन पाउँदा’ ?
हिरो राई: पहिलो अवसर’नै मेरो जिन्दगीको अचुक अवसर ठानेको छु। जुन ‘तोरी हरियो’ गीत रेकर्ड गर्दा खुसीले आँखाबाट आँ’सु झर्‍यो। मेरो लागि गीत संगीत जीवन हो। दर्शक श्रोता भगवान् हुन्। संगीत मेरो जिन्दगी हो। पत्रकार साथीहरू पाहुना हुन, भने स्टुडियो र स्टेज पुजा गर्ने मन्दिर हो। हुनत नेपालमा थुप्रै वरिष्ठ कलाकारहरु हुनुहुन्छ।
उहाँहरुको अगाडि मैले धेरै बोल्नु उपयुुक्त नहोला। तैपनि साँच्चिकै म गीत संगीतको क्रेजि हुँ। हाल नेपालमा धेरै किसिमका गीत संगीत विधाहरुछन् जस्तै लोक पप: लोक आधुनिक, लोक दोहोरी: र्‍याप संग: तथा पुर्वेली, पश्चिमेलि लोक संस्कारहरु फरक फरकछन्। तर मलाई अलिक बेसी मन पर्ने भनेको पुर्वेली लोक भाका, लोक दोहरी नै हुन्। त्यसैले पनि होला म त्याता तिर बेसी पेरित भएको।
चुर्ण पुन मगर: के छ त कलाकारितामा भविष्य देखेर लाग्नु भएको हो’ ?
हिरो राई: कलाकारितामा तत्काल त्यस्तो भन्ने अवस्था भने छैन। तैपनि हामी भनेको नेपाल र नेपालीको सांगीतिक संस्कृतिलाई बचाइ राख्ने र आगन्तुक पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो। यो क्षेत्रमा हुँदै हुदैन भन्ने चाहि होइन। धेरै कलाकार मित्रहरू हुनुहुन्छ जसले यहीँ क्षेत्रबाट रोजि रोटी चलाई रहनु भएको छ। तर हामीले त्यति पर नसोचेकै राम्रो।
फेरि सबै क्षेत्र र सबै ठाउँमा पैसा मात्र ठूलो कुरा होइन। किनकि गीत संगीत संग प्रत्येक्ष हाम्रो संस्कृति, संस्कार, आम नेपालीको जीवनचक्र गाँसिएको कुरा हो। यसमा व्यवसायिक करण हुनुपर्ने र फाइदा नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जस्तै भनिन्छ नि संगीत एउटा जीवन हो। सुख दु’खको सहयात्री हो। यसको संरक्षण र संवर्धानमा हामी सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ।
यदाकदा संगीतिक बजारमा भाइरसहरुको चहलपहल पनि छ। लय/शब्द समायोजन, देखि चो’री च’कारी, अ’सलील ह’र्कत सम्म। तर हामीलाई त्यस्तो प्रकारको अ’भद्र, अ-व्यापार नैतिकताले दिदैन र सुहाउँदैन पनि। हामी स्वच्छ निश्पक्ष र सदियौँ देखि चल्दै आएको लोक संस्कार प्रति विश्वास गर्ने मान्छे हामीबाट ती अन-आवश्यक ह’र्कतहरु सोच्न सकिदैन। र सांगीतिक बजार पनि सकेसम्म स्वच्छ रहोस् भन्ने कामना गर्दछौं।
चुर्ण पुन मगर: ‘हवस्’ समय र जानकारीको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईंको सांगीतिक यात्रा सफल रहोस्, शुभकामना।
यस्तो थियो पहिलो गीत अडियोमा सुन्नुहोस्।